गल्कोट – १ दुदिलाभाटीका कृषक एक हप्ते कृषि भ्रमणमा जाँदै ! – ebaglung.com
गल्कोट – १ दुदिलाभाटीका कृषक एक हप्ते कृषि भ्रमणमा जाँदै !
२०७५ फाल्गुन १०, शुक्रबार १४:१०	Top News, अन्य समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७५ फागुन १० । कृषि बन तथा वातावरण समिति दुदिलाभाटीको आयोजनामा गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर १ दुदिलाभाटीका कृषक १ हप्ते कृषि भ्रमणमा जाने भएका छन । वडा भित्रका करिब ४० जना कृषक फागुन १२ देखि १८ सम्म देशका बिभिन्न ठाउमा भएका कृषि फर्महरुको अवलोकन गर्न जाने समितिका सचिव जीवन भण्डारीले ईबागलुङलाई बताए ।
कृषि तालिम तथा अवलोकन भ्रमणका क्रममा ईलाम, पोखरा, धादिङ, सिन्धुली, ईटहरी, गोर्खा, तनहुँ, नारायणघाट लगायतमा ठाउमा भएका चिया खेती, दुघ उत्पादन, छुर्पी, अम्रिसो खेती, अदुवा खेती, अलैचि खेती लगायतका बिभिन्न कृषि फर्महरुको अवलोकन गराईने अवलोकन भ्रमणका संयोजक हिरा बहादुर काउचाले जानकारी गराए ।
नगरपालिकाको ३ लाख र स्थानिय कृषकहरुबाट केहि रकम संकलन गरि भ्रमणको आयोजना गरिएको काउचाको भनाई छ । दुदिलाभाटीमा पछिल्लो समय कृषि पेसामा लाग्ने कृषकहरुको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको भन्दै भ्रमणका लागी रकम बिनियोजन गरेको वडा अध्यक्ष नेत्र बुढाथोकीले बताए । कृषि भ्रमणले आधुनिक कृषि प्रणालिका बिषयमा बिशेष ज्ञान हुने आयोजकको विश्वास छ ।
हटिया बजारमा नो पार्किङ एरिया तोकिएपछी यात्रुलाई सुबिधा, सवारी चालकलाई समस्या !